Sida loo tirtiro asalka sawirka Word si deg deg ah oo fudud | Hal-abuurka khadka tooska ah
Lola curiel | | Tababarada
Eraygu waa mid ka mid ah hab-sameeyayaasha eray bixinta ee sida aadka ah loo isticmaalo. Qayb ka mid ah caannimadeeda waxa loo nisbayn karaa fudayddeeda dhinaca maaraynta, laakiin sidoo kale tirada badan ee qalabka iyo hawlaha ay bixiso. Waa barnaamij aad u dhameystiran oo u ogolaanaya isticmaalaha inuu ku daro nuxur dheeri ah qoraalka, fududeynaya fahamkiisa, tusaale ahaan, isticmaalka sawirada ama isticmaalka qalabka sawirka, oo ka dhigaya mid soo jiidasho leh.
Maqaalkan waxaan ku bari doonaa sida loo tirtiro asalka sawirka Word, adoo isticmaalaya aaladda "ka saar asalka".. Nidaamku waa mid aad u fudud oo aad u badan faa'iido u leh dejinta dukumeenti leh sawirro aan lahayn asal ama lacag aad adigu samaysatay. Sii wad akhrinta qoraalkan iyo ku hel 3 tillaabo fudud.
1 Fur sawirka oo dhig si aad u dhaqaajiso
2 Isticmaal qalabka asalka ka saara
3 Nadiifi xulashada tooska ah ee Word
4 Isku day inaad abuurto asal cusub
Fur sawirka oo dhig si aad u dhaqaajiso
Waxa ugu horeeya ee aan sameyn doono ayaa ah ku fur sawirka Word kaas oo aan ka saarayno asalka. Waan awoodnaa si toos ah u jiid sawirka bogga ama waan awoodnaa guji geliso> sawirka> sawirka faylka oo ka raadi kumbuyuutarkaaga.
Hadda waxaan u soconaa u beddel habka ku habboon qoraalka si ay si xor ah ugu dhaqaaqdo. Haddii aad laba jeer gujiso sawirka, waxaad si toos ah u tagi doontaa "qaabka sawirka", wax sii habayn qoraalka oo waxaad dooran kartaa mid ka mid ah labadan doorasho: "qoraalka gadaashiisa" ama "qormada horteeda".
Isticmaal qalabka asalka ka saara
U fiirso sababtoo ah hadda qaybta muhiimka ah ee casharrada ayaa bilaabmaya! Haddii aad eegto dhinaca bidix ee sare (ee muuqaalka qaabka sawirka) waxa aad haysataa badhan odhanaya "ka saar asalka". Aan ku dabaqno.
Sida aad arki doonto, hadda qayb ka mid ah sawirka waxaa lagu dahaadhay lakab casaan ah, in aagga casaanka ah waa waxa barnaamijku si toos ah u tixgelinayo "background" iyo, sidaas darteed, way tirtiri doontaa. Laakiin si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood Eraygu si fiican uma garto waxa "saldhig" iyo waxa aan ahaynba, inta badan qaybo ka mid ah gadaasha ayaa si dhuumasho ah u gala aagga aynu doonayno inaynu sawirka ka ilaalinno iyo lidkeeda. dhib malahan xallinteeda waa mid aad u fudud.
Nadiifi xulashada tooska ah ee Word
Xagga sare, waxaad ku leedahay laba calaamadood: lagu daray iyo laga jaray. Calaamadahani waa kuwa naga caawin doona inaan saxno xulashada tooska ah ee Word.
"+" ayaa kuu ogolaan doonta inaad soo kabsato meelaha aan rabno inaan badbaadino ee sawirka iyo kuwa si khalad ah u galay aaggaas casaanka ah.
The "-", wuxuu sameeyaa si sax ah lidkeeda. Waxay u oggolaanaysaa in lagu daro aagga casaanka ah meelaha ay ka midka yihiin asalka iyo in barnaamijka aan la ogaan.
Labaduba waxay u shaqeeyaan sidii nooc burush ah. Muhiim ma aha in la rinjiyeeyo aagga aad rabto inaad si faahfaahsan u saxdo, kaliya bixinta taabasho yaryar ayaa ku filan. Si gaar ah u fiirso geesaha sababtoo ah taasi waa halka ay inta badan ka jiraan khaladaadyo badan, si degan u samee, sababtoo ah nooca fashilka ah wuxuu burburin karaa isbeddelka taariikhdaada. Marka aad ku faraxsan tahay natiijada guji xaji isbedelada.
Isku day inaad abuurto asal cusub
Haddii aad samaysay ilaa hadda, waxa aad mar hore ku guulaysatay in aad asalka ka saartid sawirka! Hadda, sii maskaxdaada xorta ah male-awaalkaaga iyo isku day inaad abuurto lacag cusub. Fikrad wanaagsan in la helo halabuurka xiisaha leh waa geli qaabab oo ku ciyaar cabbir iyo midabyo.
Markaad geliso qaababka, si aad uga ilaaliso inay ku socdaan sawirka hortiisa, laba jeer guji oo guji Qaabka qaab > habayn > dib u dir > dib u dir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo tirtiro asalka sawirka Word si deg deg ah oo fudud
Sida loo sameeyo kalandarka